Wararkii ugu Dambeeyay dagaalkii maanta ka dhacay degmada Balcad iyo Khasaaraha ka dhashay. - Latest News Updates
Wararkii ugu Dambeeyay dagaalkii maanta ka dhacay degmada Balcad iyo Khasaaraha ka dhashay.
Wararkii ugu dambeeyay laga helaayo khasaaraha ka dhashay dagaalkii maanta ka dhacay duleedka Degmada Balcad ee Gobalka Sh/dhexe ayaa sheegaya in 5-Askari ayaa la sheegay inay ku dhinteen tiro kalane ay ku dhaawacmeen dagaalkaasi,iyadoo sidoo kale halkaasi lagu gubay Gaari ay wateen Ciidanka la weeraray.
Khasaaraha dhanka Dowladda soo gaaray ugu waynaa dhimashada sarkaal lagu magacaabi jiray Maxamed Raage oo lagu naanaysi jiray (Maxaa Raage) waxaana xaqiijiyay geerida sarkaalkaasi madaxda degmada Balcad, mana jirto hadalka soo baxay labada dhinac.
Dhanka kale Dagaalkaasi ayaa la sheegay in lagu gubay Gaari ay saarnaayeen Ciidanka dowladda, waxaana lala helay Baasuuke, iyadoo weerarka uu ka dhacay waxaa la sheegayaa in weerarkaasi ka dhacay deegaanka Haan-Sheekh.